ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဖြူးသူနှင့်စက်ရုံမှ Flat Spiral Spring ၊ မှအရည်အသွေးမြင့် Flat Spiral Spring ၊ ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ။
Flat Spiral Spring ၊
Flat Spiral Spring ၊ ဖန်တီးထားသောပစ္စည်းမျိုးစုံကိုကမ်းလှမ်းခြင်းသည်သူတို့၏အရည်အသွေးအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကိုဖန်တီးရာတွင်စစ်မှန်သောပစ္စည်းများသာအသုံးပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အဆင့်အတန်းခွဲခြားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သောအဆောက်အအုံများရှိသည်။
Volute Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’s ကနဦးထုတ်လုပ်မှု,ရှည်လျားသောသမိုင်း,နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာ,အဓိက ပြည်တွင်း OEM ကားထုတ်လုပ်သူများထံ ထောက်ပံ့ပေးသည်။,နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မော်တော်ကားထုတ်လုပ်သူများထံ စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။.
3821 Volute Spring,၁၀*3mm ကားထိုင်ခုံထောင့်ချိန်ညှိစပရိန်,ဆန့်ကျင်သည်။-သံချေးဆီ
ပို့ဆောင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်၍ ငွေပေးချေမှုကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
ကြွက်တက်ခြင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,နှင့် စမ်းသပ်ရန်အတွက် နမူနာများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,ဖောက်သည်များသည် နမူနာ သို့မဟုတ် ပုံများကို ပေးနိုင်ပါသည်။,နှင့် Tong Na တို့သည် ဖောက်သည် လိုအပ်ချက်အရ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
Material China Steel ထိုင်ဝမ်
TS16949 နှင့် ISO90001 လက်မှတ်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.stampingparts.org/my/flat-spiral-spring.html
အကောင်းဆုံး Flat Spiral Spring ၊ ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက်သင်သည် Flat Spiral Spring ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ၊ OEM နှင့် ODM ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ခုမှ
Flat Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၏အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုထုတ်ကုန်,ရှည်လျားသောသမိုင်းနှင့်အတူ,အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာများ ကျွမ်းကျင်သည်။.၎င်းသည် ထိုင်ဝမ်ရှိ အဓိက OEM စက်ရုံများသို့ ထောက်ပံ့ပေးသည်။,နောက်ပိုင်းတွင် အခြားဒေသများရှိ အဓိက မော်တော်ကား OEM စက်ရုံများသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။. GSC46-1 Volute Spring,၃.3*9.7mm Car Seat Adjuster Used Spring,Saponification လုပ်ငန်းစဉ် Coating ကုသမှု ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန် ပထမဆုံး ပို့ဆောင်မှုအတွက် ကောက်ခံငွေ နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံ,crimping မှဖွဲ့စည်းရန်,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,နှင့်နမူနာစမ်းသပ်မှုရနိုင်သည်။ တရုတ်သံမဏိ ထိုင်ဝမ်ပစ္စည်း ISO90001&TS16949 လက်မှတ်
Flat Coil Spring ၊
Volute Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစောဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။,နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်နည်းပညာနှင့်အတူ,အရည်အသွေးသည် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။.ထို့အပြင် ပြည်တွင်းကားထုတ်လုပ်သူများက လက်ခံကျင့်သုံးကြသည်။,အရှေ့တောင်အာရှကိုလည်း တင်ပို့ရောင်းချပါတယ်။,ဥရောပနှင့်အမေရိကန်. 0003 Flat Spring,၂.4*8.ကား Windows Lift အတွက် 2mm Flat Spring,ED Coating ထိုင်ဝမ်မှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Delivery Quantity ညှိနှိုင်းပေးချေမှုနည်းလမ်း Rolling material မှ စပရိန်ဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ,အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု.Sample Spring ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်တရုတ်သံမဏိပစ္စည်း ISO90001 နှင့် TS16949 လက်မှတ်
Flat Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီမှ အလွယ်ကူဆုံး တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။,ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာသည် အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။,အရည်အသွေးအလွန်တည်ငြိမ်သည်။,ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ OEM ကားစက်ရုံများသို့တင်ပို့သည်။. 3Q32 Volute Spring,၃.2*ကားထိုင်ခုံထောင့်ချိန်ညှိကိရိယာအတွက် 15mm Flat Spring,ဆန့်ကျင်သည်။-သံချေးဆီ ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန် ပို့ဆောင်မှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ နွေဦးဖွဲ့စည်းခြင်းသို့ လှိမ့်ကာ အလိုအလျောက် ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ ပစ္စည်းများ.ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းနှင့် နမူနာများကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။. ပစ္စည်းကို ထိုင်ဝမ် China Steel မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါသည်။. TS16949 နှင့် ISO90001 နှစ်ခုလုံးကို လက်မှတ်ရထားသည်။
Volute Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစောဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။,40 နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ,နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးသည် အလွန်ကျွမ်းကျင်သည်။,ပြည်တွင်းကားစက်ရုံများတွင် အသုံးပြုမှုအပြင်၊,ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ကားတပ်ဆင်စက်ရုံများသို့လည်း တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိသည်။. 4Q18 Flat Spring,၃.2*8.2mmRV Angle Adjuster အတွက် Volute Spring,Saponification လုပ်ငန်းစဉ် Coating ကုသမှု ထိုင်ဝမ်တွင်ပြုလုပ်သည်။ Delivery Quantity ညှိနှိုင်းပေးချေမှုနည်းလမ်း ကြွက်တက်ခြင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်းအထိ,လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။,အရွယ်အစားနှင့် ခွန်အားကို ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရ ချိန်ညှိနိုင်ပြီး နမူနာစမ်းသပ်မှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုင်ဝမ်တရုတ်သံမဏိပစ္စည်း ISO90001&TS16949 လက်မှတ်
Flat Wound Spring ၊
Flat Spring သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။’၎-ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်း,နှစ် 40 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ,နည်းပညာနှင့် အရည်အသွေးသည် အလွန်တည်ငြိမ်သည်။,ပြည်တွင်း OEM ကားထုတ်လုပ်သူများနှင့် နိုင်ငံခြားကားထုတ်လုပ်သူများထံ ထောက်ပံ့ပေးသည်။. 3Q08 Flat Spring,၃.4*8.ကားထောင့်ချိန်ညှိကိရိယာအတွက် 2mm သရက်ကင်းစပရိန် ထိုင်ဝမ်ထုတ်ကုန် ဝယ်ယူမှုပမာဏအလိုက် ငွေပေးချေမှု ညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ crimping မှဖွဲ့စည်းခြင်းအထိအပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု,ပုံများအတိုင်းထုတ်လုပ်သည်။,နမူနာ သို့မဟုတ် ထောင့်ထိန်းညှိမှုအရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနိုင်သည်။ ပစ္စည်းကို ထိုင်ဝမ် China Steel မှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူပါသည်။ TS16949 နှင့် ISO90001 နှစ်ခုလုံးကို လက်မှတ်ရထားသည်။